Sebenza ekhaya phakathi kwendalo kubuntofontofo be-A/C
I-Kazhagam yindawo elula yasekhaya, ene-rustic ivakalelwa phakathi kohlaza. Kusekupheleni kwemithi, embindini wenduli. Sisetingi esifanelekileyo kwiingcali ezijonge indawo yokuya emsebenzini ukusuka ekhaya. Ikwafanelekele ngokufanelekileyo amagcisa kunye nababhali abafuna uxolo kunye nokuzola ukucamngca kunye nokuvuselela iijusi zokuyila.
Indawo kwakhona ilungile kwiintsapho ezijonge indawo yokuba kunye ukuze zibe kunye.
I-Kazhagam yimizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka kumlambo waseBharathapuzha. I-4 km ukusuka kwi-Kerala Kalamandalam eyaziwayo, isihlalo sobugcisa kunye nenkcubeko yaseKerala. Yindawo entle yokufunxa ezinye zeendlela zobugcisa zakudala zaseIndiya kwaye, ukuba unethamsanqa, ukonwabele imiboniso yamagcisa adumileyo.
Itempile yaseGuruvayoor, enye yezona ndawo zingcwele zaseMzantsi India, imalunga neekhilomitha ezingama-45 ukusuka eKazhagam (malunga nokuhamba kweyure). Ezinye izinto ezinomtsalane ezikufutshane ziquka udederhu lweenduli zeNelliampathy ezinembonakalo yangaphandle ebekwe malunga neekhilomitha ezingama-70 kunye nedama laseMalampuzha, elikumgama omalunga neekhilomitha ezingama-60.
I-Painkulam yidolophana eqhelekileyo egcina umtsalane wehlabathi elidala. Amasiko amadala emiboniso yasekuhlaleni ebizwa ngokuba yiVela kunye nePoorams yonyaka yiminyhadala ejongwe kakhulu ngabahlali.
UMnu. Nair, uya kufumaneka ukukunceda ngalo naluphi na ukhokelo lwasekuhlaleni.